Maxay tahay sababta ka dambeysa internet la’aanta ka jirta Soomaaliya.
Shabakadda Netblock ee la socota dhaqdhaqaaqa intarnet-ka ayaa Maqnaanshaha qadka ee Magaalada muqdisho la xiriirisay “dhacdadii baarlamaanka ee Sabtidii” ee la sheegay in xilka looga qaaday Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Qoraalka shirkadda ayaa lagu yiri “Ma jirto wax muujinaya in xarig caalami ah oo badda hoosteeda mara uusan shaqeyneyn oo saameeyay Soomaaliya,” ayaa lagu qoray farriin Twitter ah oo shirkaddaas ay baahisay.
« Taliyaha Boliiska Soomaaliya oo dalacsiiyay Saraakiil Ciiidan.
Madaxweyne Qoor qoor oo Muqdisho soo gaaray. »